Fanariana fako, inona ny olana ateraky ny rivotra, ny tany ary ny rano? | Green Renewable
Nuria | | Trano maintso, Tontolo_iainana
Ny fomba fikirakirana ny fako dia mbola olana iray miandry amin'ny tanàna maro manerantany, indrindra fa ny be mponina indrindra noho ny habetsahan'ny fako novokarin'ny mponina tao.
Noho ny tsy fisian'ny fanodinana fako mahomby, nanjary olana ny fanariana fako matanjaka tena matotra amin'ny faritra maro amin'ny planeta.
1 Karazana fako
2 Mandoto ny rivotra, ny tany ary ny rano ny fanariam-pako
3 Fandotoana rivotra noho ny fanariana fako
Ahitana vondrona lehibe telo ny fako:
voajanahary: fako biolojika toy ny peel voankazo sy legioma, sombin-tsakafo, taratasy taratasy (landy, volon'ondry sy landihazo). Ireo dia fako manimba.
Tsy miaina: mineraly sy vokatra sentetika (metaly, vera, baoritra vita amin'ny plastika). Fako elektronika. Tsy voajanahary izy ireo.
fahadiovana: fako amin'ny fitaovam-pitsaboana efa niasa (gaza, fehy, landihazo), taratasy fidiovana, lamba famaohana, tavy ary lamba famaohana azo atsipy
La fako fanadiovana no mampatahotra ny mpiaro ny tontolo iainana indrindra satria tena mihevitra ny fako izy ireo.
Azo averina ahodina ny fako biolojika ary mamokatra zezika ho an'ny zavamaniry sy hazo fihinam-boa, ary ny fakana tsy an-javamanana dia efa azo zakaina 100 isan-jato.
Miaraka amin'ny politikam-bahoaka marina sy ny fanentanana ny olom-pirenena mba hahafantaran'izy ireo ny maha-zava-dehibe ny fanasokajiana ny fako, ho voavaha ny ampahany amin'ny olana ara-tontolo iainana.
Ny fako tsy biolojika dia azo averina ampiasaina na ampiasaina indray, ary ireo organika, lasa zezika, zezika vita an-trano na sakafo ho an'ny biby sasany.
Mandoto ny rivotra, ny tany ary ny rano ny fanariam-pako
Fa ny olana lehibe indrindra dia fikirakirana ny fako sy fangaro amin'ny fako isan-karazany izay mankany amin'ny fanariam-pako na fanariam-pako ary hitranga izany mandra-pahatongan'ny fanodinana ny faran'ny isan-jaton'ny fako mafy indrindra.
Mandritra izany fotoana izany ny fiaraha-miaina karazana fako marobe ao ny fitotofana tany dia mbola miteraka fandotoana ny rivotra, ny tany ary ny rano mampihena ny kalitaon'ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny, ary indrindra amin'ireo tanàna akaikin'ny toerana fanariam-pako, izay mazàna mifantoka betsaka amin'ny zanak'olombelona.
Fandotoana rivotra noho ny fanariana fako
El maloto amin'ny rivotra ny rivotra avy amin'ny famotehana ny fako, amin'ny lafiny iray, ny tany Voakasik'izany ihany koa ny fako mifangaro aminy sy ny Agua ovaina izany rehefa atsipy mivantana any anaty ranomasina sy renirano ny fako na rehefa avy ny orana manadio ireo zavatra misy poizina mamokatra ireo fihetsika simika mitranga rehefa mifandray amin'ny rivotra na amin'ireo fitaovana hafa ny fako.
Rehefa simba ny fako biolojika dia vokarina entona entona tahaka azy ireo: metanina (CH4), Oxyde nitrous (N20), Gazy karbonika (CO2). Ity farany no manimba indrindra noho ny poizina misy azy ary satria mijanona eo amin'ny atmosfera mandritra ny dimanjato taona eo ho eo.
Ireo entona ireo dia tompon'andraikitra amin'ny fiovan'ny toetr'andro rehefa mamandrika ny hafanana ateraky ny taratry ny masoandro izy ireo ary mampitombo ny fiakaran'ny hafanana (fiakaran'ny maripanan'ny tany). Tombanan'ny mpahay siansa izany hafanan'ny planeta afaka mitombo eo anelanelan'ny 1,5 ka hatramin'ny 5,5º raha tsy voafehy ny famoahana entona entona ao anaty habakabaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Trano maintso » Fanariana fako
agustina cabrera dia hoy izy:
Inona no banga ihany koa no tadiaviko avy amin'ny rano
Mamaly an'i agustina cabrera
Mpampanonta Franklin sy Jimi faha-XNUMX B dia hoy izy:
Ireo mpianatra kilasy fahenina B an'ny IE ACGR dia nahatsiaro tena ary nampanantena ny hisafidy ireo fako mba tsy hanohy handoto ny tranonay izay sy ny planeta tany.
Valiny ho an'i Franklin sy Jimi Publishers faha-XNUMX B
ary mangataka amin'ny rehetra izahay mba hisaintsaina an'io satria olana lehibe io efa mahazo antsika io